Monetizing YouTube: Olee otú YouTubers na-eme Ego
Kedu ka ị na-esi enweta ego site na ụda gị? Ezigbo mma?
Ọfọn, gịnị ma ọ bụrụ na i no varem ike ime ya na ntụrụndụ nke ụlọ gị? Enweghị obi ọ bụla iji kọọrọ, ọ dịghị oge ị ga-agbaso, ọ dịghịkwa oge ọrụ ọrụ.
Na-ada ka ọrụ nrọ!
Maka ọtụtụ ndị mmadụ, nke ahụ bụ ọrụ dịka ỊTuber yiri ka ọ gụnyere. Naanị ịnọdụ ala n’ihu igwefoto ma mee vidiyo banyere iri nri, na-eme nkuzi etemeete, ma ọ bụ na-egwu egwuregwu vidiyo ma ị ga-eme ka ego ego na nlele niile ị nwetara.
Nke a bụ ihe ịbụ ỊTuber anaghị adị mfe dị ka ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na – eche banyere ịbanye n’ụwa nke YouTubing, e nwere nnukwu ajụjụ abụọ ị ga – achọ ịma:
Ego ole ka ỊTuber simple?
I kwesiri ime ja?
N’iburu nke ahụ n’uche, ka ị banye n’ime ọrụ nke gị na YouTuber ma chọpụta ma ịbụ onye na-emepụta ọdịnaya na YouTube kwesịrị ya.
1 Ego Ole Ka Ndi Nlekọta YouTube kacha elu?
2 Kedu ka Ị ga – esi mee ego ha?
2.1 Monetització de YouTube amb 1-Wuru
2.2 Kedu ka e si agbakọta ọnụego mgbasa ozi?
2.3 Ego 2: Banyere YouTube
2.4 Ngwaahịa / Nkwado
2.5 Na-ere ahịa gị
2.6 3- Ckedfunding ike nke
3 Ịghọ onye ị ga – eme
3.1 Nke a ọ bụ maka gị?
3.2 Iji YouTube és a més de Nkume Nzọụkwụ
3.3 Ịbụ gịTTuber bụ ihe gbasara obi ụtọ
Ego Ole Ka Ndi Nlekọta YouTube kacha elu?
Tupu anyị agbada na ntinye ntinye nke ego ị na – eme ka ỊTuber, ka anyị lelee ụfọdụ n’ime ihe kachasị ỊTubers ma chọpụta ihe ha simple kpọmkwem.
Un lloc propi en els nous mitjans de comunicació de Rockstars, a la part del nou, a la memòria de YouTube, a la nau enweta, a la nit, no a la vaga, a la bara, a la vista, a la possibilitat. Oi que YouTuber bew PewDiePie (Felix Kjellberg), onyere iwu banywu 500 to ndị debanyere aha can ọwy na nake 1.5 1.5 echiche kwa vidio.
A la vostra part, a la vostra pàgina web, a YouTube, PewDiePie no us heu enviat 12 dòlars per arribar al lloc, és a dir ni a la meitat ni a la meva pàgina. A més, a més, a més de fer servir els serveis que Rooster Teeth Corporation, a la vegada, ensenya 13 milions de dòlars aproximadament, obtingueu una quantitat de temps de menjar àpic a la costa en $ 2,9 $ per $ 2,9 $.
PewDiePie kwudoro na nso nso a – ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 3 na ụbọchị 2 mgbe ahapụchara vidiyo a (hụ ya dị ndụ).
N’ozuzu, ụbụụụụịịụụ mm mm mm mm ihehehehehehehehehe YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube site site site site site site site site site site site site.
Kedu ka Ị ga – esi mee ego ha?
Ugbu a na ị maara ndị bụ nnukwu ego a YouTube, ka anyị lelee otú ha si enweta ego ha na otu o si emetụta gị. N’ụzọ bụ isi, e nwere ọzọ abụọ dị mkpa isi rụpụta na YouTube ma ha bụ:
Nbudata YouTube na mmemme mmemme
Ndị na-akwado ya na ego ndị ọzọ
Ụ bụrụ na ịnwe nkụda mmụọ na iji YouTube dị ka ikpo okwu gị, ị ga-ahụrịrị hụ na ị we not akaụntụ YouTube nke orziri iji mee ego.
Monetització de YouTube amb 1-Wuru
No hi ha possibilitat de fer-ho, ni de bon tros, ni de veritat que pot fer-ho, no hi hagués un gran pressupost, com a lloc de YouTube a YouTube. vés a obtenir monetització com a també conegut a Google Adsense.
Obtingut una Monetització de YouTube a la secció: Nbanye> Ọwa> Ọnọdụ na Akụkụ> Monetització (ma ọ bụ, pịa ebe a).
Ịtụgharị ego na akaụntụ gị na-enye gị ohere inweta ego site na ọdịnaya mbụ gị site na mgbasa ozi na-etinye na seeyo gị mgbe a na-ele ya anya. No us en Google Adsense, però no és conegut com ịtọ ozi nkwụnye ụgwọ na ikwe ka Google tinye mgbasa ozi na seeyo gị, bbe ebe ị ga-enweta nnukwu ego YouTube gị n’ezie.
N’ikpeazụ, ị ga-etinye akwụkwọ maka a Ngwakọta mmemme YouTube mmemme nke ga – enye gị uru ole na ole na akaụntụ gị, dị ka ngwá ọrụ nyocha, ngwá ọrụ nhazi ngwa ngwa, na ikike . Hi ha YouTube Ony Mmekọ YouTube, ha ga-achọ ịnweta 10.000 echiche ọha na eze na ọwa gị (ya, bé, 1.000 vidiyo see seeyo 10) ma gụọ ya na YouTube ka ị bụrụ Onye Mmekọrịta YouTube mara mma.
Ozugbo i nwetachara ihe niile ahụ, qualsevol, no és així, que no us expliquem ni a la pàgina web de YouTube..
Mgbasa ozi bụ ọkpụkpụ azụ nke YouTuber guzobere na nke a, ị na-ahụ ha. Nchịkọta mgbasa ozi na mmalite nke vidiyo ma ọ bụ mgbasa ozi gbasaa na ala nke vidiyo bụ otú ọ bụla YouTuber si eme ka ego si na vidiyo ha.
Ozugbo ịmalite ịkọwa vidiyo gị, wwere ike ịhọrọ otú ị chọrọ ka mgbasa ozi ga-apụta na seeyo gị na ego ole ị ga-enweta ga-adabere n’tú ndị na-ege gị ntị si emetụta ya. Ụ bụ ezie na ọ bụ ụzọ kachasị mfe iji nweta ego na YouTube, ụ bụkwa ihe mgbagwoju anya n’ihi na YouTube na-emepụta ya.
Kedu ka e si agbakọta ọnụego mgbasa ozi?
No heu decidit YouTube na-atụle (mgbe onye-na elele pịa ma ọ bụ lelee mgbasa ozi gị) yana maka ihe ọ bụla 1.000, ị ga-enweta ihe $ 7.50 $. Nsogbu bụ otú i si gụọ echiche ahụ, ebe ọ bụ na ọ dabere na otu ndị na-ege gị ntị. Ọ bụrụ na onye na-ele anya kpebie sitekwasa site na mgbasa ozi ma ọ bụ jiri ad-blocker, ị gaghị akwụ ụgwọ maka echiche ahụ. N’ihi nke a, echiche dị elu apụtaghị na ọ bụ vidiyo na-enweta ego ego. Gràcies a Equiquila a 10.000 a través de 3.000 puk, a més de 22,50 dòlars.
Iji buli uru gị na vidiyo na mgbasa ozi, ị ga-achọ ịma nke mgbasa ozi kachasị mma nke ọdịnaya. Ọ bụrụ na ọ bụ obere vidiyo nke 3, mgbasa ozi gbasaa nwere ike ịdị mma karịa nchịkọta nke abụọ 30. N’iji mmemme Onye Mmekọ YouTube, ị kwesịrị inwe ohere ịnweta nchịkọta nchịkgeta YouTube gị ntị.
N’agbanyeghị na ọ kachasị mfe ịmepụta, inweta ego site a YouTube adịghị ezughị ezu n’onwe ya, nke simple ụtụtụ n’ime YouTubers na-achọta ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi enweta ego.
Ego 2: Banyere YouTube
Ka ọ na-anọ ugbu a, wnweta nanị na YouTube na-esiri ike karị n’ihi nke a, ụ bụghị ihe a na-ahụkarị ịhụ ỊTuber ịgabiga YouTube iji nweta ego ha. N’oge ahụ, ụzọ atọ dị ukwuu bụ: nkwado na ngwaahịa, ịzụ ahịa nke onwe ha, na ịba ụba.
Aha ukwu YouTubers dị ka Iwe Joe na Jenna marbles dabere na njikọta nke atọ ahụ iji mee ihe ha na-enweta. Ndị a bụ mgbe ọtụtụ ụzọ HowTubers si enweta ụgwọ ọrụ ha kwa afọ.
Ngwaahịa / Nkwado
Ọ bụrụ na ị chịkọtara ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ, ọhụụ ga-enwe ụlọ ọrụ ndị nwere mmasị ịkwado gị maka mgbanwe maka ngwaahịa gị na ọrụ gị. Nkwado ndị a na-abụkarị na ọrụ ma ọ bụ ụlọ ahịa ọ bụla ị ga-akwụ ụgwọ na-adabere n’otú ọtọtụ ndị na-ekiri si pịa na njikọ gị. Ọ dị mkpa ịmara na, ụ bụrụ na ịmee seeyo akwadoro, ị ga-emerịrị ya gwa ya na akaụntụ YouTube gị.
Otu n’ime ọtụtụ onyinye nkwado YouTube na-achọta FameBit, ọ bụ ahịa maka ndị okike ịchọta ohere nkwado ma nweta ego site n’ịkepụta na ikesa ọdịnaya.
Na-ere ahịa gị
Ọ bụrụ na ị kwadoro akara gị ma nwee ezigbo ndị na-eguzosi ike n’ihe, wwere ike ịmalite ịzụ ngwáahịa gị site na ịkọ ya na seeyo gị. Ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ nke gị bụ usoro dị mfe ma dị mfe na ụdị ahịa / ọrụ ịnere ike ịnye nwere ike ịdịgasị iche, ụ bụrụhaala na ọ gbasara ndị na-ege gị ntị. Smosh, dịka ọmụmaatụ, na-emesi ọtụtụ ihe banyere ịzụ ahịa ma eleghị anya na-eme ka ego buru ibu ụlọ ahịa ha n’ịntanetị.
Ụlọ ahịa Smosh.
3- Ckedfunding ike nke
Ihe na-eme n’oge na-adịbeghị anya n’etiti ndị na-emepụta ọdịnaya bụ iji ìgwè mmadụ na-eme ihe na okpukpu abụọ kasị ukwuu na-ekpo ọkụ na-eme ugbu a Kickstarter na Patreon. Ihe dị iche n’agbata abụọ ahụ bụ na onye nke mbụ nọ na nkwụnye ego na-akwado ọrụ ma nke ọzọ bụ ụdị na-agagharị azụ. Ntughari isi bụ ụzọ kachasị mma isi mee ka ndị na-eso ụzọ gị kwụọ ụgwọ maka ụgwọ ego dị ukwuu. Ihe atụ ole na ole nke ụgwọ a na-akwụ ụgwọ bụ nanị ọdịnaya nke ndị ọrụ akwụ ụgwọ, nkwekọrịta nke onweye, na nwwá ahịa pụrụ iche.
Na mgbanwe you YouTube YouTube na na youwu ego, ọtụtụ ndị na-emepụta ọdịnaya na YouTubers agbanyewo ndị na-ege ya ntị iji kwụọ ụgwọ ọrụ ha. Ntughari ego nwere ike ịbụ isi iyi ego ma ọ bụrụ na ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma, ma ịkwesịrị ịmara ebe ikpo okwu na-adabara ndị na-ege gị ntị.
Ọ bụrụ na ụdị ọdịnaya ị na-achọ ka ịmepụta bụ otu nkwụsị (ntụgharị ihe nkiri ma ụ bụ album egwu), Kickstarter bụkarị ebe kacha mma ịmalite.
Na Kickstarter, ị na-ebido otu oru ngo yana ego ị chọrọ iji mezue ọrụ gị. Ndị mmadụ na-ekwe nkwa na ya ma ọ bụrụ na ịexie ike iru ihe mgbaru ọsọ gị n’ime oge imecha, ego ga-enweta ego ahụ. Mmemme Kickstarter na-ebuwanye ibu ihe ụfọdụ na-eme ka ọtụtụ nde ego nweta dollar.
Ụfọdụ ndị a ma ama Kung oké Iwe jisiri ike inweta $ 600.000 $ site ego ego nkwa ya.
Ọ bụ ezie na Kickstarter na-ebute nnukwu ego a na-akwụ ụgwọ, a na-enye Patreon aka ka ọ dịkwuo ntakịrị ma ọ bụ na-aga n’ihu.
O yikarịrị ka ị ga-achọta YouTubers na-akpọ ụlọ Patreon dịka ọwke inye ego nkwụnye ego siri ikeick Kickstarter. Dị ka Kickstarter, ị na-edepụta peeji nke nwere i mgbaru ọsọ na Patreon, ihe dị iche bụ na ihe mgbaru ọsọ bụ ịkwụ ụgwọ ego kwa ọnwa karịa otu. YouTubers no fa més que arribar a Jim Jim Sterling i a Red Media Media, a la vegada que no és possible fer-ho amb la borsa i fer-ho amb 12.000 dòlars a 19.000 $ a 19.000 $..
Jim Streling va guanyar 12.000 dòlars, amb 12 milions de dòlars més per a canals de YouTube.
Ịghọ onye ị ga – eme
Nke a ọ bụ maka gị?
Ka ọ dị ugbu a, ị ga-enwerịrị echiche nke ihe ị na-eme ọganihu ỊTuber na otú ha si aga ime ya. Ọtụtụ n’ime nnukwu YouTubers malitere ịme ọdịnaya na isiokwu na ebe ha na-enwe mmasị na ya ma nwee agụụ ịnọgide na-eme ọdịnaya ahụ.
Ịmara ihe ị na-achọsi ike ma bụrụ onye ọkachamara n’ọhịa ahụ ga-enyere gị aka ịmalite, ma n’ikpeazụ, ọ ga-adabere na oge na mgbalị dị ukwuu ị dị njikere itinye aka na-eto eto gị.
Ọ dị mfe iche na dị ka YouTubers, ihe niile ị ga – eme bụ ịṅa ọchị na igwefoto. Ma eziokwu nke okwu ahụ bụ, ịbụ ỊTuber pụtara ịrụ ọrụ karịrị igwefoto ịhazi ma nyochaa ọdịnaya gị, achọta ụzọ iji chebaa ya nke ọma, na ijide n’aka na i nwej zue zuru.
Iji YouTube és a més de Nkume Nzọụkwụ
Maka akụk P ọganihu PewDiePie, i no vàrem ọtụtụ narị ndị ọzọ ị na-agbalị ime ya YouTube YouTube ma bụrụ ndị na-adị ndụ. Nke bụ ihe simple ndị na-emepụta ọdịnaya ji kpebie na ha agaghị adabere kpamkpam na YouTube dịka ihe nkesa ha.
Twitch bụ ihe atụ kachasị elu nke ikpo okwu nke na-enye gị ohere ịbanye ọdịnaya gị na ndị na-ege ntị mgbe ị na-enweta ndụmọdụ na onyinye sitere na ndị na-ekiri. Iji YouTube gaa na mgbanwe n’ime ọrụ dị iche iche bụkwa ihe a na-ewu ewu na ọtụtụ ihe ỊTubers na-eme n’ime fim, telivishọn, na mgbasa ozi.
Na 201, Jimmy Tatro malitere "TheJimmyTatroChannel," nke e mesịrị gbanwere "NdụAccordingToJimmy. "Hi ha quatre grans protagonistes de Netflix Usoro" Vàndol americà. "; yana vidio "22 Jump Street" na "nnukwu 2".
Ịbụ gịTTuber bụ ihe gbasara obi ụtọ
No sóc el ego ego n’nnbụ onye ubTuber nkeere ike iyi ụda, ma ọ bụ, ma n’ikpeaz i, ihe na-eme ka ọtụtụ ndị ỊTubers nọgide na-eme ịdayanaya abụghị ego. Ọ bụ ọṅụ nke ime ka ndị ọzọ nwee afọ ojuju.
Ịbụ YouTuber pụtara na ọ bụghị mgbe niile ka ị na-achọ ile vidio na elekere anya otu nde na ịnweta ọnụọgụ nọmba nnukwu aha. Ịbụ gịTuber bụ banyere ịnyefe agụụ gị na ihe okike ma mee ka ọ bụrụ ihe ndị mmadụ na-enwe.
Ja senzill, jo ị na-eche? Malite na-eme vidiyo ndị ahụ!
Monetiseer op YouTube: Olee otú YouTubers na-eme Ego
Zpeněžení YouTube: Olee otú YouTubers na-eme Ego
تحقيق الدخل من YouTube: Olee otú YouTubers na-eme Ego